चि हानबाट पुर्खाहरुको श व निकालेर उत्सव मनाइन्छ « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ माघ ६ गते बिहिवार
प्रेमिकाको आमालाई मिर्गौला दिएर बचाए, उपचार सफल भएपछि युवतीले अर्कैसँग बिहे गरिन्
कोटेश्वरमा टिपरको ठक्करबाट प्रकाशको मृत्यु, पछाडि बस्ने लामाको गोडा भाँचियो
पोर्चुगल जान्छु भनेर हिँडेका छोरा तिन बर्षदेखी बे’पत्ता, यता आमाको रुवा’बासी (भिडियो हेर्नुस)
अमेरिका र बेलायतमा भेटियो लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको नक्सा
यिनै हुन् खेसरिलाल यादब !जो सुनसरी महोत्सवमा नआउदा यस्तो सम्म भयो
राजश्व नतिरी अमेरिका भाग्न लागेका क्यासिनो सञ्चालकले बुझाए १४ करोड
बज्यो खतराको घन्टी : संक्रमणले नेपालमा तोड्यो रेकर्ड, एकै दिन यति धेरै संक्रमित, चार जनाको मृत्यु
संयुक्त राष्ट्र: अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूको अधिकार खतरामा
गाउँको यस्तो नाम जुन लेख्न भन्न नै लाजमर्दो, इन्टरनेटमा यो नाम सर्च गरे आइडी नै हुन्छ ब्लक
चि हानबाट पुर्खाहरुको श व निकालेर उत्सव मनाइन्छ
२०७७ भाद्र २५ गते बिहिवार प्रकाशित
एजेन्सी । विश्वमा थुप्रै खाले रितिरिवाज र चाडपर्वहरु मनाइन्छन । प्राय सबै चाडपर्वहरु रमाइलो, आत्मीय शान्ति र खुसीयालीको अनुभुतिसंग जोडिएका हुन्छन । त्यस्तै ईण्डोनेशियामा पनि एउटा अनौठो चाड मनाइन्छ । तर झट्ट हेर्दा त्यो चाडले तपाँई हामीलाई खुसी नबनाउन पनि सक्छ । किनकी त्यहाँ मनाइने त्यो अनौ ठो चा डको सो झो सम्बन्ध पुराना मा नव श वहरुसंग जोडिएको हुन्छ ।
ईण्डोनेशियाको एक जनजातीय समुदायले मनाउने त्यो चाडलाई ‘मा नेने फेस्टिभल’ भनिन्छ । यो चाड सय बर्षअघिदेखि सुरु भएको हो । यो चाड मनाउनुका पछाडी इण्डोनेशियाको बरप्पू गाउँका बासिन्दाहरु माझ एउटा पौराणिक कथा निकै प्रचलित छ । जसअनुसार स य बर्ष पहिले टोराजन जनजातीय समुदायका एक शि कारी जंगलमा शि कार गर्न गएका थिए ।
पोंग रुमासेक नामका ती शि कारीले जं गलकोबीचमा एउटा लास देखे । सडे गलेको अवस्थामा रहेको त्यो लास देखेर शि कारी रुमासेक बाटैमा रोकिए । उनले त्यो लासलाई आफ्नो कपडा लगाइदिएर अन्तिम संस्कार गरिदिए । यो घ टनापछि शि कारी रु मासेकको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो । उनका सबै दुख क ष्टहरु ह राए । समृद्धि छायो ।
यही घ टनापछि टोराजन जनजातीय समुदायमा आफ्ना पूर्वजहरुको श व नि कालेर सजाउने चलन सुरु भएको हो । यो समुदायको परम्परागत मान्यता अनुसार शवको सजधज गर्ने कामले पूर्वजहरुको आत्माले आर्शिवाद दिन्छन । यो चाड मनाउने कार्य कसैको मृत्युपछि सुरु हुन्छ । आफन्तजनको मृत्युपश्चात शवको अन्त्येष्टि नगरि कैयौं दिनसम्म उत्सव मनाइन्छ ।
बालिकाको टाउकोमा प्रेसर कुकर फ’सेको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरि,यो ! (हेर्नुहोस् भिडियो सहित
स्वस्थानी व्रत सुरू, स्नान गरेर माधवनारायणको दर्शन गरे पाप पखाली पुण्य कमाइने विश्वास
……..तेस पछि पिडित युवतीको बयान : उसले बिवाह गरेको छैन भनेर म संग…..
किड्नी फेल हुँदा शरीरले देखाउँछ यस्तो संकेत,धेरैलाइ थाहा छैन यस्तो संकेत,पुरा हेर्नुहोस
संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो ६ वर्षको बिरालो (फोटो फिचर)
२ बर्ष अघि अष्ट्रेलिया पुगेर एमपीएल पढिरहेकी २२ वर्षिय सुस्मिता मृत अवस्थामा फेला
त्रिभुवन विमानस्थलमा आजफेरी यस्तो भयो ! ३ करोड नेपालीको शिर निहुरियो
६ वर्षसम्म बच्चा नभएपछि देवरसँग सु; त्न द; बाब दिन्थे श्रीमान्,एकदिन अचानक…
३३ वर्षीय जितेन्द्रले गरे १६ महिनाका शिशुको हत्या, अर्की बालिका घाइते
काठमाडौंको कलंकीमा घट्यो डरलाग्दो घटना